Apple inofarira kodzero dzeiyo yehupenyu firimu yeayo audiovisual chirongwa | Ndinobva mac
Apple inofarira kodzero yeiyo animated firimu yeayo audiovisual chirongwa
Zve-zvinoda zvemukati zviri muvogue. Vashandisi havadi masevhisi anovaisa kune mamwe marongero. Nekudaro, masevhisi akaita seNetflix, HBO, nezvimwe. ivo vanozivikanwa kwazvo nevashandisi. Movistar + yakatoita danho rayo mazuva mashoma apfuura. Uye Apple inoenderera ichisaina uye ichishanda kukupa iwe iyi mhando yebasa munguva pfupi iri kutevera uye uwane kunyange yakawanda mari. Chinhu chekupedzisira chave kuzivikanwa ndechekuti iyo kambani inotungamirwa naTim Cook inofarira kuwana kodzero dzeiyo firimu yehupenyu.
Parizvino tanzwa nezvemamwe mapurojekiti eApple anosanganisira matanho mune izvi. Ichokwadi kuti vese vari vaviri Netflix - mambokadzi wazvino mubato - seHBO kana Amazon vari pamberi pavo. Chenjerera Amazon nekuti iri kubheja zvakanyanya kune mamwe marudzi ezvirimo senge nhabvu. Uye ndezve izvozvi akatopihwa kodzero dzeanopfuura mumwe mutambo weLa Premier - Chirungu cheEnglish- uye zvinoita sekunge ari kudawo kuwana kodzero dzekugona kupa mitambo yeSpanish LaLiga.
Apple inoenda mune dzimwe nzira zvinoenderana nezvakataurwa kubva kune inozivikanwa portal Bloomberg. Pamusoro pekunyatso tarisa zvemukati mechimiro cheyakateedzana uye neapo neapo maficha kugadzirwa, zvinoita sekunge ivo vanodawo kunyudza meno avo muchikamu chemifananidzo.
Zvinoenderana naMark Gurman nekambani, Iyo dhiri neIrish studio Cartoon Saloon yave pedyo nekuvharwa. Uyezve, zvinogona kutora nguva yakati rebei kupfuura zvichidikanwa, asi dzinenge dziri zviratidzo zvekutanga zveApple kubheja pane ino chikamu. Chido chaApple ndechekuwana kodzero dzeiyi firimu kuti ugogona kuigovera muUnited States uye nekune dzimwe nyika.
Saizvozvowo, iyo bhaisikopo haisati yagadzirwa uye hapana runyerekupe nezve mazuva izvo zvinosimbisa kuburitswa kwavo kumusika. Nekudaro, zviri pachena kuti masevhisi ekushambadzira ari iro ramangwana ramangwana rekambani dzemakomputa. Uye kune izvi isu tinofanirwa kuwedzera kuti kunyangwe Apple isiri kumberi mune izvi, ndiyo kambani ine mari yakawanda yekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inofarira kodzero yeiyo animated firimu yeayo audiovisual chirongwa
Trainz A New Era, mutambo wechitima weMac